BEMANONGA-MORONDAVA : Katekista katolika notapahan-doha
Taorian’ny famonoana ireo mpitandro filaminana roa izay nisesisesy tany Belo sur mer ny herinandro lasa teo, dia ny mpivavaka indray koa izao no lasibatr’ireo dahalo any amin’ny Faritra Menabe. 10 août 2017
Tamin’ny fomba feno habibiana tanteraka no namonoana ity lehilahy katekista ny fiangonana katolika iray ity, ny alatsinainy tolakandro teo. Tao amin’ny fokontany Antsahamiroaky kaominina ambanivohitry Bemanonga, Distrikan’i Morondava, no nitrangan’ity famonoana olona tamin’ny fomba feno habibiana ity.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, dia avy nampanao fotoam-bavaka ity farany ka tamin’ny lalana hody izy no nisy nanakana. Notapahin’ireo jiolahy ny lohany ka maty tsy tra-drano. Olona tamin’ny lalana sendra nandalo no nahita ny razana nitsirara tamin’ny tany ka avy hatrany dia nampandre ireo mpino namany tany an-toerana ity farany.
Voalaza fa mbola hita teny aminy avokoa ireo zavatra noentiny, toy ny vary sy ny baiboly. Tsy fantatra ny antony tena namonoana ity lehilahy ity hatreto satria raha nokendaina, dia tsy tokony hita miaraka amin’ny fatiny teo avokoa ny entana teny aminy. Tsy mandry ny tany amin’iny faritra Menabe iny ankehitriny, na amin’ny antoandro be nanahary aza dia tsy mahasakana ireo dahalo manao ny asa ratsiny mintsy.
Nivahiny tao amin’ny radio iray tao an-tampon-tanànan’i Morondava ny alahady teo
i Roberto Tinoka solombavambahoakan’i Sakaraha voafidy avy amin’ny antoko volomboasary na Mapar. Manoloana ny fanjakan’ny tsy fandriam-pahalemana no nanaovany tatitra kely tao amin’ity radio tsy miankina iray ao an-toerana ity. Voalaza fa sendra nitsidika ny fianakaviana no anton-diany ao Morondava satria zanak’i Menabe ihany koa ity solombavambahoaka ity.
Tao anatin’ny andro vitsy nahatongavany tao an-toerana dia efa nahita ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka tokoa any amin’ny Faritra Menabe iny ny tenany ka voatery nanao valan-dresaka tamin’ny radio. Voalaza ihany koa fa mbola tsy nandrenesam-peo ihany ny Prefet na ny Lehiben’ny Faritr’i Morondava hatramin’izao manoloana ny tsy fandriam-pahalemana fa indrindra ny fanafihan-dahalo.
Efa miantraika amin’ny mpino indray izy amin’izao dia mety ho hisy amin’izay ny fandraisana andraikitra ireo tompon’andraiki-panjakana ireo.